Youth Committee – Page2– CTUM
Published by ctum at May 17, 2019
AFFM Youth committee election and planning meeting
AFFM Youth committee election and planning meeting. May16-17 လူငယ်ကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်များရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေးကို မြန်မာနိုင်ငံတောင်သူလယ်သမားနှင့်စိုက်ပျိုးရေးအလုပ်သမားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်(AFFM)အဖွဲ့ဝင်လူငယ်များဖြင့်ပြုလုပ် လူငယ်ကော်မတီ ရွေးကောက်ပွဲ နှင့်လုပ်ငန်းစဉ်အစည်းဝေးကို မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာအလုပ်သမားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်(CTUM) သွေးစည်းညီညွတ်ရေးခန်းမ တွင်၂ရက်တာကျင်းပပြုလုပ်မည်ဖြစ်သည် အစည်းအဝေးတွင် မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာအလုပ်သမားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်(CTUM)ဥက္ကဌ ဦးမောင်မောင် မှအမှာစကားပြောကြားခြင်း မြန်မာနိုင်ငံတောင်သူလယ်သမားနှင့်စိုက်ပျိုးရေးအလုပ်သမားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်(AFFM)မှ ဥက္ကဌ ဦးသန်းဆွေ တွဲဘက်အတွင်းရေးမှူးဦးဌေးလွင်တို့မှအဖွင့်အမှာစကားပြောကြားခြင်း CTUM ပညာရေးဌာန […]
အလုပ်သမားသမဂ္ဂအတွင်းရှိလူငယ်နှင့်အမျိုးသမီးကဏ္ဍဆိုင်ရာ နှင့် မြန်မာနိုင်ငံရှိရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များတွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၄- ၅ ရက်နေ့၊ ရန်ကုန်မြို့၊ ထိုဆွေးနွေးပွဲတွင် အဖွင့်အမှာစကားကို ဦးမောင်မောင် – CTUM ဥက္ကဌ နှင့် ATUC ဒုဥက္ကဌ ဒေါ်ထွေးထွေးသိန်း – CTUM ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားဌာနမှူး Bro. Cedric […]
Published by ctum at July 7, 2018
First day of 8th Youth Leadership Training
First day of 8th Youth Leadership Training is happening in Myat Taw Win Hotel, Naypyitaw with 28 representatives of CTUM’s sector federations. မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အလုပ်သမားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ် – CTUM […]
Published by ctum at May 22, 2018
7th Youth Leadership Training
7th Youth Leadership Training (၇)ကြိမ်မြောက် လူငယ်ခေါင်းဆောင်မှု သင်တန်း (၁၈-၂၀ မေ ၂၀၁၈ CTUM Solidarity Hall) အဆိုပါသင်တန်းတွင် အဖွင့်အမှာစကားကို ဦးမောင်မောင် (CTUM ဥက္ကဌ)၊ ဦးစိုးကိုကိုနိုင် (လူငယ်ကော်မတီ ဥက္ကဌ) တို့က ပြောကြားခဲ့သည်။ ယနေ့ သင်တန်းပထမနေ့တွင် အခြေခံသဘောတရားဆိုင်ရာ […]